season - Synonyms of season | Antonyms of season | Definition of season | Example of season | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for season
Top 30 analogous words or synonyms for season
Virtus.pro ၁၈ ကြိမ်မြောက် ESEA Season ပွဲကို ဧပြီလတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။ Virtus pro အသင်းသည် ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပသော CEVO Season7ပွဲတွင် Natus Vincere အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော် The general strength of the wartime army varied greatly depending onanumber of factors: the authority of the king, the population of the territories he controlled, and the season of year. Because most of the conscripts were farmers, most wars were fought during the dry season. The famous Forty Years' War was largely fought during the dry season, and armies went back to till the land during the rainy season. Onlyafew times in the imperial era was the decision to extend the campaign to the rainy season made, most notables being the First Anglo-Burmese War and the Burmese–Siamese War (1765–1767).
ဂျွန်အွန်ဂျီ Jung has collaborated with various artists for OSTs and promotional songs. For the project "A Cube for Season #Green", Jung Eun-ji and fellow Cube artist Yang Yo-seob, sang the duet track "Love Day." In August 2012, Jung recorded two promotional singles, "All For You" and "Our Love Like This" with "Reply 1997" co-star Seo In-guk for the drama's soundtrack.
မယ်ရီ စထရိ(ပ်) မယ်ရီ စထရိ(ပ်)သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် The Playboy of Seville ပြဇာတ်၌လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် The Deadliest Season ရုပ်သံဇာတ်လမ်း၌လည်းကောင်း ဗွေဆော်ဦး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူမ၏ ပထမဦးဆုံးသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်သည့် Julia ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၏ The Deer Hunter ဇာတ်ကားနှင့် ၁၉၇၉ ခုနှစ်၏ Kramer vs. Kramer ဇာတ်ကားဖြင့် အော်စကာဆု အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့အဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့ရာ Kramer vs. Kramer ဇာတ်ကားတွင် သူမ၏ ပထမဦးဆုံးသော အော်စကာဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၏ Sophie's Choice၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၏ သံမဏိ အမျိုးသမီး (The Iron Lady) ဇာတ်ကားဖြင့် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
တေလာဆွစ်ဖ် တေလာသည် ၂၀၀၆ခုနှစ်၏ အချိန်အတော်များများကို ရေဒီယိုနှင့်တီဗွီတွင် ဖျော်ဖြေရင်း "တေလာဆွစ်ဖ်" ကိုအရောင်းမြှင့်တင်နေခဲ့သည်။ "တေလာဆွစ်ဖ်" အယ်လ်ဘမ်မှ Tim McGraw၊ Teardrops on My Guitar၊ Our Song၊ Picture to Burn နှင့် Should'vd Said No ဟူ၍ Singleသီချင်း၅ပုဒ်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Our Song နှင့် Should've Said No တို့သည် Billboard Hot Country Songs ဇယားတွင် နံပါတ်တစ်နေရာကိုရရှိခဲ့သည်။ အခြား Singleသီချင်းများသည်လည်း အတော်အတန်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ တေလာသည် Our Song သီချင်းကို တစ်ကိုယ်တည်းရေးထားကာ ကိုယ်တိုင်ဆိုထားသောကြောင့် Billboard Hot Country Songs ဇယားတွင် နံပါတ်တစ်ရဖူးသမျှလူများတွင် အသက်အငယ်ဆုံး သီချင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆိုသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ Teardrops on My Guitar သီချင်းသည် Billboard Hot 100 တွင် နံပါတ်၁၃ထိချိတ်ခဲ့ပြီး Hitသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တေလာသည် "Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection" အမည်ရှိ ခရစ္စမတ်အယ်လ်ဘမ်ကို ၂၀၀၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ နှင့် "Beautiful Eyes" အမည်ရှိ မီနီအယ်လ်ဘမ်ကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ တို့တွင် အသီးသီးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ တေလာသည် အခြားနာမည်ကြီးအဆိုတော်များ၏ နယ်လှည့်ပွဲများတွင် အဖွင့်အဖြစ်သီဆိုပေးခြင်းဖြင့် သူ၏ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်ကို အရောင်းမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Shenzhen is situated in the subtropical part of China, located at about the Tropic of Cancer, yet due to the Siberian anticyclone, hasawarm, monsoon-influenced, humid subtropical climate (Köppen "Cwa"). Winters are mild and relatively dry, due in part to the influence of the South China Sea, and frost is very rare. Spring begins somewhat dry, but rainfall begins to dramatically increase in April, and the rainy season lasts until early to mid October. The monsoon reaches its peak intensity in the summer months, when the city also experiences very humid, and hot, but moderated, conditions. The region is prone to torrential rain as well, with 10 days that have or more of rain.
Stoner rock ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Kyuss ပြိုကွဲခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် project အသစ်များလုပ်ဆောင်ရန် ကြိုပမ်းကြသည်။ ၁၉၉၇တွင် Roadrunner Records မှ stoner rock စုစည်းထားသော Burn One Up! Music for Stoners ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို track များတွင် Fu Manchu, Celestial Season, The Heads တီးဝိုင်းများပါဝင်ပြီး track တစ်ခုမှာ တီးဝိုင်းအသစ်ဖြစ်သော "Queens of the Stone Age" ဖြစ်ထူးခြားသည်။ Kyuss အဖွဲ့ဦးဆောင်သူ Josh Homme ပါဝင်သည်။ ၁၉၉၇ ဩဂုတ်လတွင် Josh Homme သည် Joshua Tree, California တွင် The Desert Sessions ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ The Desert Session သည် ဂီတဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ စုဝေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး Monster Magnet, Goatsnake, earthings? Kyuss နှင့် Soundgarden တို့ပါဝင်သည်။ နှစ်များစွာအကြာတွင် Brant Bjork, PJ Harvey, Dean Ween နှင့် Palm Deseri Scenceမှ အခြားသူများသည် သီချင်းရေးဆရာနှင့် ဂီတပညာရှင်များအဖြစ် ကူညီခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ စက်တင်ဘာလ Albuquerque, New Mexico တွင်ဖြစ်သည်။ Jadd Shickler (of stoner band Spirit) and Aaron Emnel တို့သည် "All that’s Heavy" ဟူသော online store ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Kyuss, Monster Magnet နှင့် Fu Manchu တို့၏ ထုတ်လွှင့်မှုတို့ ပါရှိသည်။ သူတို့သည် အနုပညာရှင်အများစု၏ အမျိုးအမည်ကို ကျယ်ပြန့်စေခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းသုံးခုနှင့်အတူ ပုံစံများကို ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဝက်ကြာပြီးနောက် Kyuss fan website ၏ ပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူသည် All That’s Heavy ကို ထောက်ခံခဲ့သည်မှာ လက်မှတ်မထိုးရသေးသော တီးဝိုင်းများ၏ စုစည်းထားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Kyuss ဝါသနာအိုးများကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့သည်။ Meteor City Record ပုံသွင်းခြင်းသည် အကြံညဏ်ရလဒ်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ "Welcome to MeteorCity" ဟုသော စုစည်းထားခြင်းများ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ မေလတွင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ တစ်ပေါင်းတည်းစုစည်းထားမှုတွင် stoner rock အနုပညာရှင်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ John Garcia ၏ Kyuss, Ed Mandell ၏ Monster Magnet နှင့် Pete Stahi ၏ Goatsnake အစရှိသော တီးဝိုင်းများဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထို album သည် ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး stoner rock တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Sixty Watt Shaman, Lowrider, The Atomic Bitchax, Dozer, Goatsnake, Drag Pack နှင့် Los Natos များတွင် နားထောင်နိုင်သည်။ Meteorcity founder များအဆိုအရ ဤအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်နေစဉ် ဒါတွေဟာ တကယ်မဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ Kyuss ၏ အဆုံးကိုလည်း စိတ်မကောင်းတဲ့လူတွေ ကမ္ဘာမှာအများကြီးပါ။ Slo Burn ၏ အဆုံးကိုလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူတို့သည် Monster Magnet နှင့် Fu Manchu ကဲ့သို့ တီးဝိုင်းများကို နားထောင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးလိုအပ်လာပါတယ်။ Welcome to MeteorCity ပေါ်လာချိန် ဤ Label ကို ရပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် ကျုပ်တို့လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ယောက်လုပ်မည်ကို စောင့်နေသည်။